नेपालको ऋण १५ खर्ब ३५ अर्ब पुग्यो, तीन वर्षमै थपियो ६ खर्ब – Nepal Press
नेपालको ऋण १५ खर्ब ३५ अर्ब पुग्यो, तीन वर्षमै थपियो ६ खर्ब
प्रत्येक नेपालीको भागमा ५१ हजार १ सय ऋण
२०७७ चैत ६ गते १२:१५
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने गरेको घाटा बजेटले राष्ट्रको ऋणभार बढ्दै गएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयताका तीन वर्षमामात्रै ६ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ ऋण थपिएको नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ थियो । त्यसमध्ये ५ खर्ब २६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण थियो भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ३ खर्ब ९१ अर्ब २० करोड रूपैयाँ थियो । अहिले कुल ऋण १५ खर्ब ३५ करोड ५६ रूपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ६७.३९ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रूपैयाँले थप भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ७३ अर्ब ५३ करोड अर्थात ६९.९२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ४४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ६५.९४ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७० अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रको ऋणभारलाई देशको जनसंख्याको अनुपातमा हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब ५१ हजार १ सय रूपैयाँभन्दा बढी ऋण थोपरिएको छ ।
यो सरकार गठन हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अंश ३० प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यस्तो अनुपात बढेर ३५.७१ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको अनावश्यक दायित्व, ऋणको ब्याज, खर्चमा अनुशासन कायम गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्षको बजेटमा ऋणको अंश तीब्ररूपमा बढिरहेको छ ।
२३ अर्ब भुक्तानी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा साँवा १२ अर्ब १३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ र ब्याजतर्फ १० अर्ब ८९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापन कार्यालयको दोस्रो क्वाटरको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
किन बढ्दैछ ऋण ?
विकासोन्मुख वा कम विकसित देशहरुले विकास-निर्माण लगायत विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने गर्छन् । ऋण लिनु आफैंमा गलत नभए पनि यसरी लिएको ऋणको सदूपयोगका विषयमा भने सचेतता आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान राजस्व संकलनले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले पनि प्रत्येक वर्ष ऋणको चाप थपिँदै गएको हो । सरकारले घाटा बजेटको ग्याप पूरा ऋणमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
दाताको स्वार्थ नमिल्ने, परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचार बढेको, ठकेदारको बदमासी, परियोजना निर्माणअघिका पूर्वतयारीहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनेलगायतका समस्या छन् । यसले गर्दा ऋणको उचित सदुपयोग हुन सकेको देखिदैन ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय सरकारको भागमा थुप्रै दायित्वहरू सिर्जना भएको छ । प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त विशेष र समपूरक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसको लागत बढिरहेको छ । सरकारले निर्मम भएर सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न नसक्दा व्ययभार बढ्दोक्रममा छ ।
यसरी सरकारले एकातिर खर्च नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसर सृजना नहुँदा राजस्वको स्रोत पनि सुकिरहेको छ । राजस्वको दायरा वृद्धि नभएका कारण हाल संकलित राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न धौधौ परेको छ ।
पछिल्लो वर्षको आएको विश्वब्यापी महामारी कोरोना भाइरस र त्यसको सतर्कताका लागि जारी गरिएको ९ महिना लामो बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याइदियो । आगामी दिनमा कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीसँगै सरकारले सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रकोरुपमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने र १५ औं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छन् । पछिल्लो समय अनुदानबाट प्राप्त हुने सहयोग कम हुँदै गएकाले नेपालले ती लक्ष्य हासिल गर्न ऋणमै भर पर्नु परेको छ ।
विज्ञ भन्छन्ः ‘डेप्ट क्राइसिस’आउन सक्छ
अर्थतन्त्रका विज्ञहरू नेपालजस्तो मुलुकका लागि वैदेशिक सहयोग अपरिहार्य भए पनि अन्धाधुन्द ऋण लिँदा भने संकट आउन सक्ने औंल्याउँछन् । विकासका ठूला परियोजनामा मात्रै ऋण लिन उनीहरुको सुझाव छ ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले आन्तरिक ऋण बढ्नु खासै ठूलो कुरा नभए पनि नेपाल वैदेशिक ऋण तीब्र गतिमा बढ्दै गएकोतर्फ भने सरकार सजग बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपालले पूर्वाधार निर्माण तथा पुन:निर्माणका लागि ऋण लिइरहेको छ । त्यसको सदुपयोग भयो भने राम्रै हो । ऋण नलिई विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्न । तर, हामीले सकेसम्म सानातिना कामका लागि ऋण लिनु उचित होइन । नेपाल वैदेशिक ऋण तीब्र गतिमा बढेको छ । यसको गति कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ पौडेलले भने ।
अर्का अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४५ प्रतिशतसम्म ऋण लिदा खासै फरक नपर्ने भएपनि नेपालमा यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘नेपालको अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अंश ३५ प्रतिशत रहेको छ, यसलाई ठिकै मान्न सकिन्छ । तर, ऋण लिएपछी त्यसको उचित सदुपयोग हुनुपर्छ । ऋणले राजस्व संकलन गर्नुसक्नु पर्छ । यो हुन सकेको छैन,’उनले भने ।
ऋण लिएपछि प्रत्येक वर्ष यसको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले पनि हामीले प्रत्येक वर्ष डेप्ट सर्भिसिङका लागि १५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित: २०७७ चैत ६ गते १२:१५